गगन थापालाई केशव स्थापितको प्रश्न : हार्ने भएपछि फिल्मी शैलीमा गरिएको नाटक त हैन ? - Dainik Nepal
गगन थापालाई केशव स्थापितको प्रश्न : हार्ने भएपछि फिल्मी शैलीमा गरिएको नाटक त हैन ?
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर १८ गते २३:३६
काठमाडौं, १८ मंसिर । बम आक्रमणमा परी चोट लागेका काँग्रेसका युवा नेता एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ का सांसदका उम्मेदवार गगन थापामाथि काठमाडौँका पूर्वमेयर तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवार केशव स्थापितले प्रश्न उठाएका छन् ।
घटना निकै शंकास्पद देखिएको भन्दे स्थापितले गगनमाथि भएको बम प्रहारको घटनाको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष जोडदार माग गरेका छन् ।
‘यो कसले गरेको हो पत्ता लगाउन जरुरी छ, सीआइबिको उच्चस्तरीय टोली गठन गरी तत्काल छानबिन हुनुपर्छ, एउटा हिन्दी फिल्ममा अनिल कपुरले अमरेश पुरीलाई खत्तम गर्न आफ्नै हातमा पेस्तोल हाने जस्तै सहानुभूतिको लागी यो प्रयत्न भयो कि ? त्यो नि छानबिन हुनुपर्छ’, स्थापित भन्छन्, ‘किनकी त्यहाँ गगन थापा हार्दै छन् । घटनालगत्तै एमाले उमेद्वार डा. राजन भट्टराई स्वास्थ्य लाभका कामना गर्न जाँदा दुर्व्यवहार गरियो त्यो खेदजनक छ ।’ भट्टराईमाथि गगनका समर्थकले गरेको दुर्व्यवहारको घटनाले आफू स्तब्ध भएको स्थापितले बताएका छन् ।
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ वडा नं २ चपलीमा घरदैलो गरिरहेका बेला सोमबार बिहान गगनमाथि बम प्रहार गरिएको थियो । जुन घटना निकै सनसनी बनेको थियो । घटनाको निन्दा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गगनलाई स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरिएको थियो । गगनलाई सहानुभूति दिन अस्पताल पुगेका उनका प्रतिस्पर्धी राजन भट्टराईलाई गगनका समर्थकले दुर्व्यवहार गरेपछि यो विषयले पनि सामाजिक सञ्जालमा राम्रो स्थान पाएको थियो ।
यता, काठमाडौँको महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि गगनलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो । चिकित्सकहरुले खतरामुक्त भनेपछि गगनको टाउकोमा पट्टी बाँधिएको थियो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको केही घण्टामै गगन भने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न काठमाडौंको सिफल पुगेका थिए । उनले पट्टी बाँधेरै चुनावी सभालाई सम्बोधन समेत गरेका थिए ।
तर, घटना निकै शंकास्पद र रहस्यमयी देखिएको भन्दै एमाले नेता स्थापितले छानबिनको माग गरेका छन् ।
अवैध सुनसहित विमानस्थलबाट तीन पक्राउ
खराब आचरणका प्रहरीलाई कारवाही गर्छु : आईजीपी खनाल
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक मंसिर अन्तिम साता बस्ने